စံချိန်တင် ပင်နယ်တီ မှတ်တမ်း ရယူသွားတဲ့ ယူနိုက်တက် - SPORTS MYANMAR
စံချိန်တင် ပင်နယ်တီ မှတ်တမ်း ရယူသွားတဲ့ ယူနိုက်တက်
2019-2020 ဘောလုံးရာသီ ဟာ ဒီကနေ့ညမှာပဲ ပြီးဆုံး သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ချန်ပီယံဆု အတွက် လီဗာပူး ၊ ဒုတိယ နေရာအတွက် မန်စီးတီး တို့က စောစောစီစီး အဖြေပေါ်ခဲ့ပေမယ့် ၊ ချန်ပီယံ လိဂ် ဝင်ခွင့် နဲ့ တန်းဆင်းဇုံ တိုက်တွေ ၊ ရွှေဖိနပ်ဆု နဲ့ ရွှေလက်အိတ် ဆုတွေ ကို တော့ နောက်ဆုံး အချိန်ထိကို ရင်ခုန်ခဲ့ရပါတယ်။
စက်တင်ဘာလ ကတည်းက ပရီးမီးယားလိဂ် အဆင့်4အတွင်း ဝင်ရောက် ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ဘရန်ဒန် ရော်ဂျာ ရဲ့ လက်စတာ အသင်းဟာ ရာသီ အပိတ် နောက်ဆုံး ပွဲစဉ်မှာ ယူနိုက်တက် ကို အိမ်ကွင်းမှာ 0-2 ရလာဒ် နဲ့ ရှုံးနိမ့်ပြီး ၊ ယူရိုပါလိဂ် နဲ့သာ ကျေနပ်သွားခဲ့ ရပါတယ်။
ယူနိုက်တက် အတွက် အနိုင်ဂိုးတွေ ကိုတော့ ပင်နယ်တီ ကနေ တဆင့် ဖာနန်ဒက် ၊ လူးစားဝင် ကစားသမား လင်ဂတ် တို့က အသီးသီး သွင်းယူ ပေးသွားခဲ့ကြတာပါ။
ဒီပွဲမှာ ထပ်ပြီး ပင်နယ်တီ ကန်သွင်းခွင့် ရရှိခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက်ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် သမိုင်းကြောင်း တစ်လျှောက် စံချိန်တင် ပင်နယ်တီ ကန်သွင်းခွင့် အရေအတွက် ရရှိတဲ့ မှတ်တမ်းကို ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။
ယခင် ကတော့ ဒီမှတ်တမ်းကို လက်စတာ နဲ့ ပဲလေ့ အသင်းတွေက စုစုပေါင်း 13 ကြိမ် စီနဲ့ စံချိန်တင်ထားတာ ဖြစ်ပြီး ၊ ယူနိုက်တက် က 14 ကြိမ် နဲ့ စံချိန် ချိုးလိုက်တာပါ။
ဒါ့အပြင် သူတို့ အသင်းဟာ ဒီရာသီ ပြိုင်ပွဲ ပေါင်းစုံမှာလဲ စုစုပေါင်း ကန်သွင်းခွင့် အကြိမ် 20 အထိ ရရှိခဲ့လို့ ၊ အင်္ဂလန် ထိပ်သီး ကလပ်တွေ အားလုံးထဲမှာ အများဆုံး အဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ပင်နယ်တီတွေ ကတော့ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ 14 ကြိမ် ၊ ယူရိုပါလိဂ်မှာ3ကြိမ် ၊ အက်ဖ်အေ ဖလား မှာ2ကြိမ် ၊ နဲ့ ကာလင်းဖလားမှာ 1 ကြိမ်စီ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ပွဲမှာ ပင်နယ်တီ ပေးခဲ့ရတဲ အရေအတွက်ဟာ3ကြိမ် ရှိခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုက်တက် ရဲ့ ဒီရာသီ ပင်နယ်တီ ကန်သွင်းခဲ့တဲ့ ပင်နယ်တီ မှတ်တမ်း
1. Vs ကလပ် ဘရု – ဖာနန်ဒက် (ဂိုး)
2. Vs အယ်ခမာ – မာတာ (ဂိုး)
3. Vs ပါတီဇန် – မာရှယ် (ဂိုး)
1. Vs လက်စတာ – ဖာနန်ဒက် (ဂိုး)
2. Vs အက်စ်တွန်ဗီလာ – ဖာနန်ဒက် (ဂိုး)
3. Vs ဘုန်းမောက် – ရပ်ရှ်ဖို့ဒ် (ဂိုး)
4. Vs စပါး – ဖာနန်ဒက် (ဂိုး)
5. Vs ဝက်ဖို့ဒ် – ဖာနန်ဒက် (ဂိုး)
6. Vs နော့ဝှစ်ချ် – ရပ်ရှ်ဖို့ (ဂိုး)
7. Vs မန်စီးတီး – ရပ်ရှ်ဖို့ (ဂိုး)
8. Vs စပါး – ရပ်ရှ်ဖို့ (ဂိုး)
9. Vs နော့ဝှစ်ချ် – မာရှယ် (လွှဲ)
10. Vs နော့ဝှစ်ချ် – ရပ်ရှ်ဖို့ဒ် (လွဲ)
11. Vs လက်စတာ – ရပ်ရှ်ဖို့ဒ် (ဂိုး)
12. Vs ပဲလေ့ – ရပ်ရှ်ဖို့ဒ် (လွဲ)
13. Vs ဝုဖ် – ပေါ့ဘာ (လွဲ)
14. Vs ချဲဆီး – ရပ်ရှ်ဖို့ (လွဲ)
1. Vs ချဲဆီး – ဖာနန်ဒက် (ဂိုး)
2. Vs ထရန်မဲယား – ဂရင်းဝုဒ် (ဂိုး)
1. Vs ချဲဆီး – ရပ်ရှ်ဖို့ (ဂိုး)